ချစ်ကြည်အေး: အွန်လိုင်းပေါ်က မော်ဒယ်မလေးများ
ကျွန်မ နောက်တောင် ကျနေပြီ ထင်ပါရဲ့။ အသံတွေ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားနေခဲ့ရတာဖြင့် ကြာ ကြာလှရော့မယ်။ ဘာသံတွေလည်းဆိုတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ၊ အတိအကျပြော ရရင် မော်ဒယ်အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတဲ့ မြန်မာမကလေးတွေရဲ့ အဖော်အချွတ် ရက်ရော ကြမ်းတမ်းမှု အပေါ် ၀ိုင်းဝန်းထောပနာပြုနေကြတဲ့ ကိုကိုမောင်မောင် ကာလသားတွေရဲ့ အသံတွေပါ။
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ တွေ့များ တွေ့မိကြမလားပဲ။ ပုဝါပါးစိမ်းစိမ်းလေး ကာထားတဲ့အနောက်မှာ အောက်ခံ ပန်တီအဖြူရောင်လေး တစ်ထည်ပဲပါတဲ့ (ကျန်တာ ဘာဆို ဘာမှ မပါတဲ့) မော်ဒယ်မကလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံ။ အဲဒီပုံအောက်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း လေသေနပ် (လေကီးဘုတ်ဆိုရင် ပိုမှန်မလားပဲ) နဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပစ်ခတ် ထားကြတဲ့ ကော်မန့်တွေကိုပေါ့ရှင်။
တစ်ချို့ကလည်း ကိုယ့်နှမသားချင်းတစ်ယောက်ကို ဆုံးမလေဟန်၊ တစ်ချို့ကလည်း သိတ်လှတဲ့အကြောင်း၊ ပုဝါလေးနဲ့သာ မကာထားရင်ဖြင့် ပိုကြည့်ကောင်းပါမဲ့အကြောင်း အတည်လိုလို၊ ရွဲ့တဲ့တဲ့လိုလို ရေးသွား ကြလေတယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ ချီပြီး အမျိုးဖျက်မတဲ့၊ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ရိုင်းပျတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ဆဲဆိုသွားကြလေရဲ့ရှင်။ စေတနာနဲ့ အပြုသဘော ပြောဆိုသွားကြတာကို လက်ခံလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်မြန်မာအမျိုးသမီးကလေးမို့ အမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ပြောတယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ You are what you say လို့သာ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
ဟီရိသြတ္တပတဲ့၊ ကျွန်မတို့ ရင်းနှီးပြီးသား စကားလုံးပါ။ လူမှာ အရှက်အကြောက်တရား ရှိရပါမယ်တဲ့။ ဘာကို ရှက်ပြီး ဘာကို ကြောက်တတ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ မကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ဖို့ ရှက်တတ်ရမယ်။ မကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ဖို့ ကြောက်တတ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မကောင်းမှုဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုနိူင်ကြရင် ရှင်းသွားမယ် ထင်ပါရဲ့။
စဉ်းစားစရာက မြန်မာပြည်ရဲ့ မော်ဒယ်လောက အနေအထားကိုက လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ရင်ပဲ ဒဏ်ရိုက်ခံရမဲ့ အနေအထားလား။ ဖော်နိူင် ချွတ်နိူင်မှ မော်ဒယ်လောကမှာ စူပါတန်းဝင်တော့မဲ့ အပေါက်လား။
မြန်မာ့မော်ဒယ်တွေ ကမ္ဘာ့မော်ဒယ်လောကနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းရေး တို့အရေးများ အော်နေကြသလား။ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ပြောရရင် နိူင်ငံတကာမော်ဒယ်တွေမှာ သူ့စံနဲ့သူ၊ သူ့လိုင်းနဲ့သူရှိပါတယ်။ မိတ်ကပ်၊ အ၀တ်အစားမော်ဒယ်လား၊ အသုံးအဆောင် ဖိနပ်၊ အိတ်၊ နာရီ မော်ဒယ်လား။ ဒီလိုလိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ မျက်နှာလေးလှ၊ ကိုယ်ထည်အချိုးအစားလေးကျရင် ရပြီ။ မလိုအပ်ဘဲ အသားတွေ သိတ်ပေါ်အောင် ၀တ်ပြနေစရာ မလိုဘူး။ ဘီကီနီ မော်ဒယ်ဆိုရင်တော့ သူဟာ လက်သုံးလုံးသာသာလောက် ရှေ့မှာ ဖုံးရုံ၊ ပေါင်တံဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ ကြိုးကလေးတစ်ချောင်းလောက် ချည်ထားရုံ ၀တ်ပြရတော့မှာ။ ဒါ သူ့ရဲ့ အလုပ်လိုအပ်ချက်၊ သူ့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ ဘ၀ရပ်တည်ချက်အတွက် ၀တ်ပြရ တာပါ။ ဒါကိုမှ Hey!!! you not shy ha ! hum သွားလုပ်နေလို့ မရပါဘူး။ နေ့စဉ်ပုံမှန်ဘ၀တွေထဲမှာတော့ သူလိုကိုယ်လို လုံခြုံထူထဲတာတွေ ၀တ်ချင်လည်း ၀တ်နေနိူင်တာ။
အဲ ပွန်းစတားလိုင်းဝင်မဲ့ မော်ဒယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် လုံးတီးပုံအဖော်အချွတ်တွေ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်ညှို့ငင်နိူင်မဲ့ပုံတွေရိုက်တော့မှာပါပဲ။ ဒါဟာ သူ့ အတတ်ပညာ၊ ဒါဟာ သူ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမို့ မကောင်းတာတွေလုပ်နေရမလားဆိုပြီး သွားဆဲရင်တော့ ကိုယ့်အကုသိုလ်နဲ့ ကိုယ်လို့ ပြောရတော့မှာပါပဲ။ ဒီတော့ ပြောရရင် အသက်မွေးမှုအတွက်လိုအပ်လို့ ၀တ်တာမျိုးကို အပြစ် ဆိုစရာ မရှိပါဘူး။ မလိုအပ်ဘဲ နာမည်ကြီးဖို့ ဖော်မြူလာတစ်ခုလို ၀တ်ပြနေကြရင်သာ...။
ကျွန်မ ပြောပါရစေ။ စင်္ကာပူကို ရောက်လာကြတဲ့ နိူင်ငံခြားသား (အမျိုးသား) တော်တော်များများထဲမှာ Geylang ဆိုတဲ့ Red-Light-District ကို မရောက်ဖူးတဲ့သူ မရှိသလောက် ရှားပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင် လိုင်စင်ချထားပေးပြီး တရားဝင်လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ အဲဒီက လိင်ဖျော်ဖြေရေး အလုပ်သမတွေဟာ ၆လတစ်ကြိမ် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးစစ်ကြရတယ်။ အများစုဟာ တရုတ်ပြည်မကြီးက လာကြပြီး ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား အဲဒီ အိမ်နီးချင်းနိူင်ငံတွေကလို့ သိရပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိူင်ငံတွေကနေ ရက်တိုဗီဇာ (၂လ-၃လ)လောက်နဲ့ လာကြပြီး ဒီမှာ တရားမ၀င် ခိုးလုပ်ကြ၊ ရသလောက်ငွေ ပိုက်ပြီးပြန်ကြ သူတွေလည်း ရှိကြပါသတဲ့။ ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိကြပေမဲ့ တရုတ်ကလာတာ ပိုများပါသတဲ့။
ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ကြီး ဟုတ်ကဲ့၊ လမ်းပွင့်စပြုလာပါပြီ။ ကမ္ဘာနဲ့ တံတားတွေထိုးလို့၊ အိမ်နီးချင်းနိူင်ငံတွေနဲ့ လမ်းတွေဖောက်လို့၊ တံခါးတွေ စတင် ဖွင့်လှစ်နေပါပြီ။ အဲဒီအခါမှာ နိူင်ငံခြားသားတွေ ၀င်ရောက် လာကြတော့မယ်။ စီးပွားရေးအရ အပြန်အလှန် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ကြ၊ ဖောက်ကားကြရတော့ မယ်။ သေချာတာက ဒါတွေနဲ့အတူ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဆိုတာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ မဖြစ်မနေ ပါလာတော့မှာ။ ဒီလုပ်ငန်းဟာ ခုမှရှိလာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုး မြန်မာဘုရင်တွေ လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တာ။ နောက်လည်း ရှိနေဦးမှာပဲ။ အဲဒီအခါမှာ ဘယ်လိုအမျိုးသမီးလေးတွေများ ဒီလုပ်ငန်းကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်မှာပါလိမ့်။ မြန်မာမလေးတွေလား၊ အ်ိမ်နီးချင်းနိူင်ငံက မိန်းကလေးတွေလား။ ကျွန်မ တွေးမိပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်လူမျိုး အမျိုးကောင်း သမီးလေးတွေကို ဒီလိုအလုပ်မျိုးနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစေချင်ကြမှာ မဟုတ်တာကိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နိူင်ငံတကာနဲ့ ကူးလူးကုန်သွယ် ဆက်ဆံရမဲ့ နိူင်ငံတစ်နိူင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက် အရ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဆိုတာ ရှိကိုရှိရမယ်။ တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ တရားမ၀င်ဖြစ်စေ ရှိနေမှာပဲ။ (ဒါဟာ Realityပါ၊ Let's face it ပါ) ကျွန်မတို့က "ဒီအထဲမှာ တို့မြန်မာမလေးတွေ မပါဘူးဟေ့"လို့ ဟစ်လိုက်ချင်တာပေါ့။ (အင်း ဒါကတော့ မျှော်လင့်ချက်ပါ၊ ဆောင်းတွင်း အိပ်မက်ပါ)
ကျွန်မ ပြောချင်တာ လိုင်းကြောင်သွားပြီ ထင်ပါရဲ့။ ဒီလိုပါ၊ ပြောချင်တာက တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းဟာ ကိုယ့်ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့သာ သက်ဆိုင်ပြီး စပ်လျဉ်းတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးကိုသာ နားလည်လက်ခံပေးလို့ ရပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ချို့က သူများထက်ပို ၀တ်ချင်စားချင်လို့၊ သုံးချင်စွဲချင်လို့၊ ငွေရလွယ်လို့၊ တစ်ခြား ဘာမှ မလုပ်တတ်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ အလွယ်လမ်းလိုက်ရင်း လမ်းမှားသွားတတ်ကြတာ။
မော်ဒယ်အလုပ်ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ ရေခဲအောင် အေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘီကီနီ ၀တ်ဆို ၀တ်ပြနိူင်ရမယ်။ အငွေ့တထောင်းထောင်းထအောင် ပူလောင်နေတဲ့ ဟင်းချိုကို အပြုံးမပျက်သောက်ပြနိူင် ရမဲ့အပြင် အိုး...သိတ်ကောင်းတာပဲလို့ ပြုံးပြီးပြောနိူင်ရမယ်။ ၆လက်မလောက် မြင့်တဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်စီးရလို့ ဖိနပ်ပေါက် နာကျင်နေပေမဲ့ တစ်ချက်လေးမှ မျက်နှာ မပျက်ရဘူး။
ကဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မော်ဒယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှ မဟုတ်တာပါဘဲလားရှင်။ ဒါတောင် အကင်းရှိသေးတာ။ လက်တွေ့ ပရိုမော်ဒယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုမှာ ဒီထက်မက ကြမ်းတမ်းတာတွေ အများကြီးရယ်။
ကိုယ် ဘယ်လိုမော်ဒယ်လိုင်းမျိုး ၀င်ချင်တာလဲ၊ အဲဒီလိုင်းနဲ့ အံဝင်တဲ့ အ၀တ်အစားလေးလောက်တော့ ၀တ်ပေါ့။ မော်ဒယ်ဖြစ်တာနဲ့ပဲ လူတွေပါးစပ်ဖျားပေါက်သွားအောင်၊ သူများထက်သာအောင် ပိုဖော်၊ ပိုချွတ်ပြမှ၊ ဘီကီနီနဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံမှ၊ လိုးရှင်းလူးပြမှ ဆိုတာမျိုးကျတော့လည်း မဟန်သေးပါဘူး။ ဒီလိုအတွေးမျိုးနဲ့ ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ အသိမျိုးရှိနေရင်တော့ အတော်လေး ရင်မောစရာပါပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ သူများက ရေးမဲ့ ပြောကျန်ခဲ့မဲ့ ကိုယ့်သမိုင်းမှာ ကိုယ့်ခြေရာ၊ ကိုယ့်လုပ်ရပ်၊ ကိုယ့်ရပ်တည် ခဲ့မှုတွေသာ အရင်းအတိုင်း ထင်ဟပ်ကျန်ရစ်ခဲ့မှာ။ ဆိုတော့ ကိုယ်လျှောက်မဲ့လမ်းကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တတ်ကြပါစေလို့သာ ဆန္ဒပြုမိပါတော့တယ်။
ပြင်ဆင်ချက်းအစိမ်းလေးက မျက်မှန်ပါတယ်ဆိုလို့ ပြန်ပြီး မျက်လုံးပြူးကြည့်ရတယ်။
အသားရောင် ဘရာလေးတော့ပါသေးတယ်လို့ ပြင်ဆင်ဖတ်ရှု့ကြပါကုန်...
မှတ်ချက်။ ။ သိက္ခာရှိရှိ လုပ်ကိုင်ရပ်တည်နေကြတဲ့ မော်ဒယ်များကို မဆိုလိုပါ။
အမသေ့ား Sat Feb 11, 12:14:00 AM GMT+8
ဇွန်မိုးစက် Sat Feb 11, 12:17:00 AM GMT+8
ပြောရရင်တော့ နိုင်ငံရေးတွေ ပါလာတော့မယ် အစ်မရေ။ ဒါကြောင့် မပြောတော့ဘူး။ ဇွန်တင်ထားတဲ့ ပို့စ်လေးကို လာဖတ်ကြည့်လှည့်ပါဦး။ ;)
မဒမ်ကိုး Sat Feb 11, 12:23:00 AM GMT+8
ရေးဖို့တွေးမိပေမယ့် မအားတာရယ် ဇက်နာတာရယ်နဲ့
ဇွန်မိုးစက် Sat Feb 11, 12:25:00 AM GMT+8
မချစ်ရေ... လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်လောက်က အ၀တ်အစားမပါတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ်လ်ပုံတွေ အီးမေးလ်တွေကတဆင့် ရဖူးကြတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ မော်ဒယ်လ် ဘယ်သူဆိုတာလည်း သိကြတယ်။ အဲဒီ့တုန်းက မျက်နှာစာအုပ်တွေဘာတွေ သိပ်ခေတ်မစားသေးတော့ ခုလောက် impact မရှိခဲ့ဘူး။ တို့မြန်မာတွေ ခေတ်မီတယ်... နေရာတွေလွဲပြီး မီနေတာ တစ်ခုပါပဲ။
မေဇင် Sat Feb 11, 12:49:00 AM GMT+8
အမချစ် အမှန်တွေ ပြောတယ်။ တကယ်ပဲ မော်ဒယ် ဆိုတာကို အသံကြားတာနဲ့ မလုံ့တလုံ့ ၀တ်စားပီး မြူဆွယ်နေတဲ့ဟန်တွေပဲ ပြေးပြေးမြင်အောင် လုပ်နေကြသလိုပါပဲ။
mstint Sat Feb 11, 12:49:00 AM GMT+8
Cameron Sat Feb 11, 01:25:00 AM GMT+8
ညနေကမှ အဲဒီပုံကြည့်ပြီး ပို့စ်တခုခုတော့ရေးရလိမ့်မယ်လို့တွေးနေတာ မကြီးဦးသွားတယ်....။ သေချာကြည့်မှာ မက်မှန်ပါတာသိရတာ စစကြည့်ချင်း ခေါင်းမွှေးတောင်ထောင်သွားတယ်...။
အဖြူရောင်နတ်သမီး Sat Feb 11, 06:24:00 AM GMT+8
ပြူးပြီး ကြည့်ထားတာ အဲဒီပုံကို..
ဘယ်သူက ထွင်လိုက်တယ် မသိဘူး၊ မော်ဒယ်လ်မှန်ရင် အဖော်အချွတ်ပါရမယ်လို့..း(
သက်ဝေ Sat Feb 11, 11:24:00 AM GMT+8
သက်ဝေ Sat Feb 11, 11:25:00 AM GMT+8
Unknown Sat Feb 11, 12:00:00 PM GMT+8
Unknown Sat Feb 11, 12:03:00 PM GMT+8
လူမျိုး​တို​င်းေ​လာက်နီး​ပါးြ​ကုံေ​တွ့​​ရ​တဲ့ြ​ပဿ​နာ​ပါ​အစ်မေ​ရ။ ကျွ​န်ေ​တာ်​တို့ေ​တာ့ ဘာ​မှ​မ​တ⁠တ်နို​င်ေ​တာ့​ဘူး​နဲ့​​တူ​ပါ​ရဲ့​။ မေ​တွ့​ချင်မှိတ်ထား​ရ​မ​လိုြ​ဖ​စ်ေ​နြ​ပီေ​လ။ အစ်မေြ​ပာ​တာ​အြ​ပု​သေ​ဘာေ​ဆာင်ပါ​တ​ယ်။ လူ​အမျိုးမျိုး ဘ၀​အေ​ထွေ​ထွ ကု​ရ​ခက်တဲ့ေ​ရာ​ဂါေ​လ​အစ်မ​ရဲ့​။
နေ၀သန် Sat Feb 11, 01:26:00 PM GMT+8
း)... မြန်မာပြည်ရဲ့ မော်ဒယ်လ်လိုင်းက တစ်လမ်းသွားဖြစ်နေပြီ.. ဘယ်လမ်းကိုသွားသလဲဆိုတာတော့ ....
ဘိုဖြူ Sat Feb 11, 01:47:00 PM GMT+8
Aungnyc Sat Feb 11, 01:51:00 PM GMT+8
မြန်မာ မော်ဒယ် ကောင်မ လေး တွေ အဖော်အချွတ် ဆင်ချင်ဘို့ ရေးတာ သိပ်ကောင်းတယ်.. မြန်မာမိန်းခလေးတယောက် ကို ဒီလို ရိုက်ထားတာ ရင်ဖိုစရာကောင်းသား ဟိ.. အမေရိကန်သူတွေ ကို မြင်နေကျ မို့ သိပ် ရင် မ ဖိုပါ.မချစ်ကြည်အေး ရေးမှ ပဲ FB မှာ ရှာတော့ တွေ့တယ်..အရင် က မသိတော့ မကြည့်ဖြစ်ဘူး.. အခု မှ ရှာတွေ့တယ်..သတင်းပေး တာ ကျေဇူးပါ။ LOL
စံပယ်ချို Sat Feb 11, 01:54:00 PM GMT+8
အမချစ်ပြောမှ ကြည့်မိတယ် ကြားဘူးလေ
ညီရဲသစ် Sat Feb 11, 04:10:00 PM GMT+8
တကယ်ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ အစ်မချစ်... လက်ရှိမော်ဒယ် လောကက မြင်ရတွေ့ ရတာက စိတ်ပျက်စရာပါ...
မအိမ်သူ Sat Feb 11, 05:03:00 PM GMT+8
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုတာကို မြန်မာပြည်က ပညာတတ်တွေအပါအ၀င် လူအတော်များများ နားလည်မှုလွဲနေကြတာလဲ အများကြီးပါလိမ့်မယ်ထင်တာပဲ မချစ်ရေ...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sat Feb 11, 07:46:00 PM GMT+8
Facebook မှာ အဲဒါတွေ တွေ့ကတည်းက ရင်ထဲမှာ ကလိကလိဖြစ်နေတာ.
အစ်မလိုဘဲ ပြောချင်နေမိတာ.. ပုံတွေမြင်ပြီး အံ့သြတဲ့စိတ်လည်း တကယ်ကို ဖြစ်မိတယ်။ ဘယ်လို စိတ်မျိုးနဲ့ အရိုက်ခံရဲတာလည်း ဆိုတာပေါ့နော်။
အမြင်မတော်တာဆိုရင်တော့ ဝိုင်းပြောသင့်ပါတယ်။ ပြောလဲပြောချင်ပါတယ်။ မြင်ရတဲ့သူတွေကို စိတ်ကြွစေတဲ့ ဝတ်စား ဆင်ယင်ပုံမျိုးကတော့ မဝတ်သင့်ဘူးလို့ ညီမအနေနဲ့လည်း ထင်မိပါတယ်။
SHWE ZIN U Sun Feb 12, 12:12:00 AM GMT+8
အဲလိုလေးဖော်မှ ပိုနံမယ်ကြီး တယ်လို့ ထင်နေကြတယ် ညီမ
သက်ဝေ Sun Feb 12, 01:27:00 AM GMT+8
နာမည်ကြီးချင်တဲ့ ရောဂါက ဆေးမရှိဘူးလေ တော်တော်ပြောရခက်ပါတယ်...း(
San San Htun Sun Feb 12, 12:18:00 PM GMT+8
ဖော်နိုင်ချွှတ်နိုင်မှ နာမည်ကြီးမယ်လို့ထင်ကြလေရဲ့ 
ငဝန်နဒီ Sun Feb 12, 12:18:00 PM GMT+8
အတွေ့ အကြုံ ယူနေတာဖြစ်မှာပါ လုပ်ရဲတဲ့ အသက်အရွယ် မှာ လုပ်ကြတာပါ...ဘယ်အရာက ဆွဲဆောင်တာကို မသိသေးလို့ ပါ... တစ်လွဲ ထင်နေကြတာပါ...သူတို့ လည်းသိရော မော်ဒယ်လည်း လုပ်လို့ မရတဲ့ အရွယ်ရောက်ရော...
Keira ju Mon Feb 13, 04:37:00 AM GMT+8
link လေးပေးလိုက်ပါ အမ...ကြည့်ချင်လို့..ညီမ fb မှာ ရှာမတွေ့ဘူး
susu Mon Feb 13, 12:08:00 PM GMT+8
အမ်တီအန် Mon Feb 13, 01:20:00 PM GMT+8
အဲ့ဒီပုံတွေ့ပြီး ရုံးက ညီမတွေတောင် ပြောမိသေးတယ်။ Facebookကွန်ယက်က ကျယ်ပြန့်တယ်။ အရှက်အကြောက်တရားကို ပေါ်ပင်ဖြစ်လိုမှုတွေက လွှမ်းမိုးနေတော့ ဒီလိုပုံတွေက အွန်လိုင်းမှာ ပလူပျံနေဦးမှာပဲ။ မိဘတွေက သိမှသိရဲ့လားမသိ။ စိတ်ပျက်ရင်လေးမိရကြောင်းပါ။
Su Mon Feb 13, 04:44:00 PM GMT+8
you cannot judgeabook by the cover ဆိုပေမဲ့ နဲနဲတော့ဆိုင်သလားလို့နော်
တချို့မသိနားမလယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလဲ ဓတ်ပုံဆရာတချို့က exploit လုပ်တတ်တယ်
အမေရိကားမှာ လို ကိုယ့် sex tape ကိုယ်ခိုးရောင်းပီး နာမယ်ကြီးအောင်မလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ တော်သေးရဲ့လို့ပဲမှတ်ပါတယ်
phyu phwe Thu May 03, 02:14:00 PM GMT+8
နောင်လည်း ဒီလိုကောင်းတဲ့ ပိုစ်လေးတွေ အများကြီး ရေးဖြစ်ပါစေ